Admin Trainee | New Harmony ﻿
10.7.2019, Full time , Printing / Publishing
Company: New Harmony
•	အများနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဦးစားပေးမည်။
•	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	Microsoft Word , Excel , Email Internet ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရုံးသုံးပစ္စည်း၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူဖူးသည့်အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
Work location 8, Yan Naing Swe 2nd St., Industrial Zone,Thaketa,Yangon.
Company Industry: Admin Trainee
2 Days, Full time , Printing / Publishing
• Design and oversee all aspects of our products • Plan and manage our social media platforms • Prepare accurate reports on our digital marketing’s overall performance • Identify the latest trends and technologies affecting our industry • Evaluate important metrics that affect our website traffic, service quotas, and target audience • Work with your team to brainstorm new and innovative growth strategies • Oversee and manage all contests, giveaways, and other digital projects
Digital Inkjet Printing & Material
New Harmony ကုမ္ပဏီသည် Digital Inkjet Printing လုပ်ငန်းအပြင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော Mimaki Brand ၊ တရုတ်နိုင်ငံမှတင်သွင်းသော Infiniti Brand များမှ တင်သွင်သော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ကြော်ငြာနှင့်ဆိုင်းဘုတ် လုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသော Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နှင့် Textile Printing တို့တွင် အသုံးပြုသော Textile Printer စသည့် Printing စက်များကို ဖြန့်ဖြူရောင်းချခြင်းနှင့် Service ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းPrinting စက်များတွင် အသုံးပြုသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ၊ စက်အပိုပစ္စည်းများ နှင့် Gift Item များကို ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချနေသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
19 Days, Full time , Printing / Publishing
•	Daily warehouse Layout arrangement •	Maintain items record, documents necessary and prepare required reports •	Check the daily warehouse assistant report , monthly stock list •	Check Packing List and maintenance the inventory management system. •	Prepare materials with Delivery Order and fill in bin car •	Inform reorder point of materials and handling materials, packing materials
32 Days, Full time , Printing / Publishing
•	နေ့စဉ် စတိုသို့ဝင်သည့် ပစ္စည်းအဝင်/အထွက် စာရင်းများပြုလုပ်ရမည်။ •	Store ရှိပစ္စည်းများအားလုံးကို Bincard သုံး၍ အဝင်အထွက်စာရင်းသွင်းရမည်။ •	Daily Stock In/Out ကို Excel တွင်စာရင်းသွင်းရမည်။ •	Store တွင်ပစ္စည်းများစနစ်တကျထား� ...
33 Days, Full time , Printing / Publishing
•	ရုံးသုံး၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ရမည်။ •	ရေ၊မီးနှင့်ရုံးအဆောက်အအုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမည်။ •	မော်တော်ယာဉ်အကြောင်းနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ •	အများနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ •	ရုံးစာများရု ...
•	Marketing Plan (or) Business Model Canvas ဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Customer Relationship တည်ဆောက်နိုင်ရမည်။ •	Sale Target ပြည့်မီအောင် ရောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Printing Machine Industrial ကိုစိတ်ဝင်စားလေ့လာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• Manage the administrative activities the overall organization so that administrative staff, equipment, supplies and other resources are used effectively and economically • Budget and asset management - prepare annual budgets, monitor and control expenses, check and approve voucher. • Manage the day to day operations ofavariety of office services to ensure the organization's administrative needs are met. These activities may include: copy services; office supplies; administrative assistance; records management; fleet management; clea ...
•	Customer Visit •	Customer Relationship •	Creat Collect Product Catalogue, Product Information •	Event, Sale, Quotation, Invoice & Do, Sale Inquiry & Order •	Can do with Sale Target •	Can do with Daily Activity Report •	Creative thinking and intrest in printing industry
•	နေ့စဉ် စတိုသို့ဝင်သည့် ပစ္စည်းအဝင်/အထွက် စာရင်းများပြုလုပ်ရမည်။ •	Stock ပစ္စည်းများအားလုံးကို Bincard သုံး၍ အဝင်အထွက်စာရင်းသွင်းရမည်။ •	စတိုသို့ဝင်သည့် ပစ္စည်းများအားလုံး စနစ်တကျထားရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွ� ...
After sales Service Admin
151 Days, Full time , Printing / Publishing
•	Maintenance Report Daily အား နေ့စဉ် Excel တွင်ထည့်သွင်းရမည်။ •	Warranty PO ဖွင့်ရမည်။ •	Customer Contact List ဖြည့်ရမည်။ •	After Sale Service Training File Data သွင်းရမည်။ •	New Harmony Production Machine များစက်ကောင်း/မကောင်းစစ်ဆေးပေးရမည်။
•	Sale Invoice , Voucher များအား Excel နှင့် Software တွင် Entry ပြုလုပ်ခြင်း •	Installment တွင် Data များ Entry ပြုလုပ်ခြင်း။ •	ရေးသွင်းပြီးသော Data များအား Excel နှင့် Software တိုက်စစ်ခြင်း •	Credit Sale နှင့် ရောင်းထားသည့် စာရင်းများအား Customer နှင့် တိုက်စစ်ပြ ...
•	Prepare For Account Data •	Taxation Prepare •	Store Stock Data Checking •	Purchase (Local & Foreign)Data •	Costing , Financial Statement & Report to Directors & Other •	Checking For We Chart Cash Data Entry •	Prepare For Need Cash Data
• စီမံခန့်ခွဲမှုရေးရာအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ • HR ပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။
•	Animation ပိုင်းကို Design ဆွဲရမည်။ •	Creative Idea များဖြင့် Design များဖန်တီးရေးဆွဲရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရမည်။ •	Color Theory နှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းစွာသိရှိရမည်။ •	Daily Report တင်ရမည်။
•	အသင်းအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ရမည်။ •	Excel ဖြင့်စာရင်းများကိုတိကျစွာလုပ်ရမည်။ •	မိမိအထက်လူကြီးအား နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရသည်များကို Report တင်ရမည်။ •	ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို အမှားယွင်းမရှိလုပ်� ...
•	Customer ထံသို့အရောက် Printing Mechine တပ်ဆင်ခြင်း။ •	Printing Machine များနှင့်ပတ်သက်ပြီး Trouble Shooting လုပ်နီုင်ရမည်။ •	Customer Relationship တည်ဆောက်ပြီး Data Collection ( အချက်အလက်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း)၊ •	Maintaining( ပြုပြင်စစ်ဆေးခြင်း)၊ •	Managing (စီမံခန့်ခွဲခြ� ...
•	Digital Inkjet Printing Machine, UV Printing Machine, Laser Cutting Machine အစရှိသော စက်ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်တွင်းသို့ ထိုးဖောက်ပေးနိုင်ရမည်။ •	Gift Item များကို Creation ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ၊ Brand ဖောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Existing Customer များနှင့် ကောင်းမွန်သော ရေရှည� ...
•	ရေ၊မီးနှင့်အဆောက်အအုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	မော်တော်ယာဉ်အကြောင်းနားလည်သူဦးစားပေးမည်။ •	အများနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်� ...
186 Days, Full time , Printing / Publishing
•	Petty Cash စာရင်းကိုင်နိုင်ရမည်။ •	အသေးသုံး/ရုံးသုံးပိုက်ဆံများ စနစ်တကျထုတ်ပေးနိုင်ပြီး စာရင်းသွင်းနိုင်ရမည်။ •	ငွေကောက်နိုင်ရမည်။ •	Petty Cash စာရင်းကိုင်နိုင်ရမည်။ •	အသေးသုံး/ရုံးသုံးပိုက်ဆံများ စနစ်တကျ ...
•	ရိုးသားကြိုးစား၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	Teamwork ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	Leadership ဖြင့် ကုန်ထုတ်ငှာနအား ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
216 Days, Full time , Printing / Publishing
•	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်၍ စကားပြောသွက်လက်သူဖြစ်ရမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
247 Days, Full time , Printing / Publishing
•	စကားအပြောအဆိုပြေပြစ်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
296 Days, Full time , Printing / Publishing
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ၊ ဦးဆောင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။
Sales & Marketing Jr.Executive
•	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီး စကားအပြောအဆိုသွက်လက်ရမည်။
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး စကားအပြောအဆိုပြေပြစ်ရမည်။
Admin Trainee Admin,Secretaial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon New Harmony Digital Inkjet Printing & Material Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Admin Trainee Jobs in Myanmar, jobs in Yangon